निशाले सार्वजनिक गरिन् आफैँले स्तनपान गराएको तस्बिर – Khabar Silo
काठमाडौं। नायिका निशा अधिकारीले इन्स्टाग्राममा स्तनपानको तस्बिर सार्वजनिक गरेकि छिन् । उनले इन्स्टाग्राममा आफ्नो छोरा युभनलाई दुध खुवाएको तस्बिर सार्वजनिक गरेकि हुन् ।
उनले विगतमा पनि ‘बेबी बम्प’ को फोटोहरु प्रदर्शन गरेकि थिइन् । गर्भवती भएको समयमा भुँडीको तस्बिर प्रदर्शन गर्दा धेरै नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएको थियो । तर, उनले फोटो प्रदर्शन गर्नुको कारण जनचेतना फैलाउनु रहेको बुझिएको थियो । हाल अमेरिकामा रहेकि निशाले महिलाहरुमा जनचेतना फैलाउनकालागि समाजिक संजालबाटै अभियान चलाएकि छिन्।
अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउनेको संख्या सन्तोषजनक भएपनि पर्याप्त छैन । स्तनपानका तस्बिरहरु चर्चित व्यक्तित्वले सार्वजनिक गरेसँगै समाजमा एकखालको सकारात्मक संदेश जाने देखिन्छ । निशाको उक्त कदमलाई सबैले स्वागत गर्नैपर्ने देखिन्छ।
प्रकाश सपुत । हो ! दोहोरी, दोहोरी जस्तो हुनुपर्छ सबैले मन पराउछन । जेनेरेशन को के कुरा ? भेग को कुरा ? नपत्याय हेर्नुस त ? ईन्द्रेणिको यो अंक ट्रेन्डिङ र भ्यु मात्र होईन लाईक कमेन्ट र सेयर । वा । कमला घिमिरेलाई हार्दिक स्वागत र धन्यबाद । तिम्रो आगमनले अर्को ५ दशक दोहोरी मर्दैन […]
लोक दोहोरी गायिक बबिता बानियाँ जेरी विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन् । दोहोरी गीतमा ट्वाक्क जवाफ फर्काउन माहिर उनी जेरीकै नामले चर्चित छन् । खासगरी एविसी टेलिभिजनमा प्रसारित कार्यक्रम इन्द्रेणीमा उनले गायका दोहोरी निकैले मन पराएका छन् । अहिले सम्म दोहोरीमा कसैसंग नहारेकी जेरीले आफ्नो लामो समय देखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरेकी हुन् । जेरी एउटा […]